[I-Moroccan] I-stylishreonamp;B, ukuthandana kwezithandani, izithombe zangasese zobuciko, ukulinganiswa kwamakhethini amakhulu, eduze ne-Didi Lake, i-Navy Museum, i-Haichang Ocean World, i-Planetarium, i-University City - I-Airbnb
[I-Moroccan] I-stylishreonamp;B, ukuthandana kwezithandani, izithombe zangasese zobuciko, ukulinganiswa kwamakhethini amakhulu, eduze ne-Didi Lake, i-Navy Museum, i-Haichang Ocean World, i-Planetarium, i-University City
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-麦乐迪
U-麦乐迪 unokuphawula okungu-346 kwezinye izindawo.
U-90% wezivakashi zakamuva unikeze u-麦乐迪 izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ikamelo lokulala elilodwa lonke, ikamelo lokuphumula elinesitayela esiphithizelayo, lingamukela abantu ababili, elinakho konke okudingekayo (iphrojektha, i-smart TV, i-air conditioning, umshini wokuwasha, isiqandisi, isitofu esishisayo, i-microwave, njll.).
Isitayela sase-Morocco sihlaba umxhwele, futhi ukushutha ngasese kusendleleni.Isimo sothando silungele abantu abashadile abathandanayo. Ikamelo lokuphumula linikeza izindlela ezihlukahlukene zokukhanyisa ukuze wakhe imithelela ehlukahlukene yokukhanyisa.Ikamelo lokulala elingu-1- 8 umbhede omkhulu wesikhumba onomatilasi ontofontofo kakhulu owenziwe sekwephuzile kanye no-100-inch we-smart projection, lala phansi futhi ujabulele i-cinema yangasese.
Umgomo wami ukuhlinzeka ngokuhlala okumnandi kakhulu kuwo wonke umngane ukuze enze izinkumbulo ezinhle lapha.Ngqongqoza ebhodini elimnyama, xhumana nanoma yimiphi imibuzo ngesikhathi esifanele, ungazizwa ukhululekile ukushiya ukuphawula okungekuhle, uma ukuthanda, sicela ungangabazi futhi unikeze ukuphawula okuhle, umbungazi omncane ngilapha ukukubonga.
Inendawo ephelele engamamitha-skwele angu-76,★ indlu inekamelo lombhede omkhulu onothando, igumbi lokuphumula elingaphandle, igumbi lokudlela, ikhishi elilodwa negumbi lokugezela elilodwa, kanye ne-balcony ekabili enyakatho neningizimu.
★Ikamelo lokulala lihlomele i-projection engu-100-inch, ikamelo lokuphumula linomabonakude angu-42-inch Xiaomi, futhi linikeza ama-megtes angu-100 wamahhala we-broadband ne-WiFi.
★Ingathatha abantu ababili. Awukho umonakalo kufenisha noma imihlobiso. Uma udinga ukushintsha indawo, sicela uyibuyisele ngemva kokufota. Uma wenza ukudubula kwezentengiselwano, udinga ukuxhumana nathi kusengaphambili.
★ Ikhishi linompheki opheka ngogesi, ilayisi lokupheka, uhhavini we-microwave, amabhodwe, izitsha, iketela likagesi. Ungapheka ukudla okulula. Udinga ukuthenga ama-condiments akho. Uma ufuna ukusebenzisa ikhishi, sicela usazise kusengaphambili. Inani elengeziwe lokuhlanza ikhishi elingu-50 yuan liyadingeka. Uma ungazigeza ngokwakho, ngeke ukhokhiswe.
★Indawo lapho kukhona khona indawo yokuhlala ingaphandle kwe-Bailian Living Square ne-Family Mart, engamakhilomitha angu-2 ukusuka e-Lingang commercial Square, e-Harbour City, nase-Xintiandi.
Imnyuziyamu Yezikebhe kanye ne-Planetarium cishe yimizuzu engu-10 uhamba ngezinyawo.
Amakhilomitha angu-3 kuphela ukusuka e-Haichang Ocean Park, isiteshi sesitimela sase-Dishui Lake (imizuzu engu-10 ngetekisi, intengo eyisisekelo).
35km ukusuka e-Pudong International Airport (imizuzu engu-40, cishe 100 yuan).
25km (imizuzu engu-45 yokushayela) ukuya e-Safari.
36km (imizuzu engu-45 yokushayela) ukuya e-Disneyland.
★ Iqhele ngamakhilomitha angu-3 kuphela ukusuka endaweni enhle yase-Didi Shui Lake. Indawo yokugibela ibhasi ingaphandle komphakathi. Iya ngqo esiteshini sesitimela i-Didi Shui Lake ne-Lingang University City. Umphakathi usondelene kakhulu ne-Haichang Polar Park. Ungayibona kuvulandi wekamelo. Kulula kakhulu ukugibela lapho. Ukupaka kumahhala emphakathini.
★ Indawo lapho kukhona khona indawo yokuhlala ingaphandle kwe-Bailian Life Square nomndeni. Iqhele ngamakhilomitha angu-2 kuphela ukusuka e-Xintiandi, isikwele esikhulu kunazo zonke kwezentengiselwano e-Lingang.